အွန်လိုင်းမှာ ကြော်ငြာရောင်းနေတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ ၀ယ်လိမ်းမိလို့ ဘ၀ပျက်မတတ် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် – CharTake
ကြည်သာ ဒီနေ့ အဓိကပြောပြချင်တာက လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ steriodကြောင့် ထိခိုက်ခံခဲ့ရ တာတွေပါ ။ ၅နစ်နီးပါး ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတာတွေမလို့ သေချာအသေးစိတ် ပြောပြပေး ပါမယ်နော် ။
အခုဆို အလှကုန် တံဆိပ်ပေါင်းစုံ onlineကနေ MLM ပုံစံတွေနဲ့ ဝင်လာတော့ ကြည်သာ့ လိုမဖြစ်အောင် မျက်နှာလေးတွေ မပျက်စီးရအာင် အမုန်းခံပြီးကို ဒီ post လေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်နော် …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ဆိုတာ ခုချိန်လို ဘယ်အရာမှ အလွယ်တကူ သိဖို့ ခေတ်မမှီသေးတဲ့အချိန် os တွေ facebookမှာ စခေတ်စားချိန် FDA approved ရတဲ့ ပစ္စည်းဆိုတာ ဘာမှန်း မသိသေးချိန် steroid ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိသေးချိန် blogger ဆိုတာ လက် ၅ ချောင်းမပြည့်သေးချိန် ထိုင်းကပစ္စည်းတွေ မြန်မာပြည်ကို online က စဝင်လာတဲ့အချိန် မင်းသားမင်းသမီးတွေ သူတို့ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေက သုံးတယ် ပြောရင် အဟုတ်မှတ်တဲ့ အချိန် ခေတ်မမှီသေးတဲ့ အချိန်ပေါ့နော်…
ကြည်သာ့လို Bangkok visa free မဟုတ်သေး ချိန်မှာ bangkok မှာ မိတ်ကပ် ကျောင်းသွားတက်ဖို့ထိ ခေတ်မီတဲ့လူ တောင် ဒီပစ္စည်းကို သုံးမိတယ်ဆို brand imageက ဘာလဲ ဆိုတာ သိကြသူတွေရှိမှာပါ ။ အဲ့အချိန်တုံးက အသက်ငယ်သေးတာရော steroid ဆိုတာဘာလဲ မသိခဲ့တာတွေရောကြောင့် သုံးမိခဲ့တာပါ အပေါစား ပစ္စည်းကို စမ်းခဲ့တာ လုံးဝမဟုတ်ပါနော် 🙂
ကဲ အရင်ဆုံး … ဘယ်လိုကြုံတွေခဲ့ရလဲ ကြည်သာ ပြောပြပါမယ်။ကြည်သာ စဖြစ်ခဲ့တာ ကတော့ 2015 လောက်မှာ ပြသနာ အတော်တက်သွားတဲ့ steroid ပါတဲ့ cream တမျိုး လိမ်းပီး ပျက်စီးသွားတာ သိသူလဲရှိမယ် မသိသူလဲ ရှိပါမယ် …
အဲ့အချိန်ကကြည်သာ onlinကနေမှ make up blogger လုပ်မယ် make up နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ လုပ်မယ်ဆိုပြီး Bangkok မှာ international makeup school တက်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ချိန်ပေါ့နော် …
( ဒါက ၂၀၁၆ New Yorkက chic studios မှာ professional makeup artist diplomaယူတုံးက ဒီတုံးကအချိုင့်တွေ မပျောက်သေးဘူး)
အတတ်ကြွဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် အလှအပနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါမယ် ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာမှ ဒီလို steroid နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါ ….
ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ ပြောပြပါမယ် … စဖြစ်ခါစမှာ အရမ်းနာပြီးတော်တော် ဆိုးရွှားသွားလို့ ထမင်းစားဖို့ ပါးစပ်မဟနိုင် စကား​ပြော ဖို့ ပါးစပ် မဟနိုင်လို့ အံကြ်ိတ်သံနဲ့ စကား​ပြော လက်ဖက်စားတဲ့ဇွန်းနဲ့ ထမင်းစားခဲ့ရပါတယ် …
ညဘက်တွေ မအိပ်နိုင်ဘဲ အနာတွေကိုက်ရင် ထထငိုငိုခဲ့ရတယ် ။မျက်နှာ မသစ်နိုင်လို့ လက်ကို ရေဆွတ်ပီး သာသာလေး တို့ရတယ် ခေါင်းငုံ့တာနဲ့ အနာတွေ တင်းပီးကိုက်လို့ ခေါင်းမငုံ့ နိုင်ခဲ့သလို ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ် မအိပ်နိုင်ဘေးစောင်း မအိပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ။
လူကြားထဲမသွားရဲပဲ ကိုယ်မျက်နှာကို mask အုပ်ပြီးအမြဲနေခဲ့ရတယ် ။ မျက်နှာကြီးတခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားခဲ့တယ် ။ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတဲ့ အလှအပအလုပ်နဲ့ လုံးဝဝေးကွာပြီး စိတ်ဓာတ် ကျခဲ့ရပါတယ် ။
အခု ဘယ်လိုကျော်လွှားခဲ့လဲ ? ဘာတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲပြောပြမယ် နော် … အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျပြီး နေနေလို့မရဘူး ။ ကိုယ်တိုင်သိလာ ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ mask အုပ်ပြီး make up class တွေဖွင့်ခဲ့တယ် ။
(ဒါက ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ဘန်ကောက်က Scandinavian makeup studioမှာ တက်တုံးက အဲ့တုံးကမျက်နှာအကောင်းတိုင်းပဲ) ။ သူတို့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး နားလည်ပါတယ် ဒီလောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ဆိုတာကို ကြည်သာ ပြောပြပေးတာပါနော် ။
ဒီလိုနဲ့ ပျောက်အောင်ကုမယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် မျက်နှာတခုလုံး ဒီဘ၀ အကောင်းတိုင်း ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး ဒီလိုပဲ တသက်လုံးနေရတော့မယ် ထင်ပီး ရယ်လိုက်ငိုလိုက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေ့တွေညတွေထပ်လဲ မလိုချင်တော့လို့ပါ ။
(ဒါက ခု မျက်နှာ)
ကြည်သာအခု ဒီနေ့ steroid ကြောင့်ကြုံခဲ့ရတာ တွေပြောပြခဲ့ပြီးပြီနော် ဘယ်လောက်ဆိုးရွားခဲ့လဲ ပုံတွေကို ကြည့်ပါနော် ။ ပြောပြချင်တာ လုံးဝ လုံးဝ onlineက တွေ့သမျှမသုံးပါနဲ့။ ကြည်သာ့ကို နမူနာ ကြည့်ပါ ။ ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ လှပတဲ့ မျက် နှာလေးတွေ မပျက်စီးရအောင်း မျှဝေပေးလိုက် ရပါတယ်နော် ။